Miasa mafy tsy misy tambiny : mangataka tambin-karama ireo mpanentana ara-pahasalamana | NewsMada
Miasa mafy tsy misy tambiny : mangataka tambin-karama ireo mpanentana ara-pahasalamana
Nivoitra nandritra ny roa andron’ny zaikabe notanterahina tetsy Ivato izay niarahana tamin’ireo mpanentana ara-pahasalamana eny ifotony ny fitakian’izy ireo tambin-karama manoloana ny asa mafy hataon’izy ireo. Resadresaka.
Tolojara Felix, Bealanana
Manentana ara-pahasalamana ao amin’ny kaominina Ambararata, distrikan’i Bealanana faritra Sofia aho efa ho 3 taona izao. Tamin’ny alalan’ny fivoriambem-pokolonolona no nanendrena ahy hanao izany asa izany. Toteny sy mamim-bahoaka ny fepetra nahafahana nanao ny asa. Ekena fa tena an-tsitrapo no nanaovako ity fanentanana ara-pahasalamana ity ho tombontsoan’ny fiarahamonina eny ifotony. Iaraha-mahalala anefa fa mafy ny asa satria an-tongotra amina kilometatra maro no hatao. Mandefitra tanteraka ny asa fiveloman’ny tena amin’ny fanentanana hatao. Misedra olana aho eo amin’ny fiainan’ny ankohonako satria mivoaka ny trano lava manao fanentanana kanefa tsy mampidi-bola. Mampiana-janaka, mamelom-bady aman-janaka, manao adidy amin’ny fianakaviana toy ny olona rehetra ny tena kanefa misasa-poana amin’ity asa ity. Izany indrindra no nanaovana antso avo amin’ny fanjakana mba hanome tambin-karama ho anay raha hitany fa tena ilaina ary nanatsara ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony ny asa ataon’ny mpanentana ara-pahasalamana.
Rasoanandrasana Liliane, Morafenobe
Anisan’ny kitro ifaharan’ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka eny ifotony ny fisian’ny mpanentana ara-pahasalamana. Hatramin’izay efa-taona nanaovako ity asa ity izay, tsy mbola nisy ny tambin-karama noraisina. Nekena an-tsitrapo ny fanaovana azy. Miombom-peo amin’ireto mpizaika namako ireto aho fa mafy ny asa fanentanana sy ny fandresen-dahatra hatao isam-pianakaviana. Sarotra ny lalana diavina amin’ny fanatrarana ny tanjona kanefa efa nekena fa tsy maintsy hatao. Na izany aza, olombelona no miasa, mahalala noana sy reraka ka tokony hojeren’ny fanjakana ihany ny fomba hanomezana anay tambin-karama. Any Morafenobe, anisan’ny tena olana ny tsy fisian’ny fanafody indrindra ny ACT hiadiana amin’ny aretina tazomoka. Iaraha-mahalala anefa fa fotoana mampirongatra ny aretina tazomoka izao. Ny hany fampaherezana ho ahy, efa betsaka ny olona resy lahatra amin’ny fanatonana tobim-pahasalamana any aminay. Nandalo ady mafy, fankahalana, fanenjehana, aretina anefa vao tonga amin’izany tanjona izany.
Tsaravintana, Befandriana Avaratra
Ao amin’ny fokontany Ambalimadiro, kaominina Maroamalona, distrikan’i Befandriana Avaratra aho no manao ny asa fanentanana ara-pahasalamana. Iombonako manana ny fangatahan’ireto mpanentana ara-pahasalamana namako ireto amin’ny tokony hanomezan’ny fanjakana anay tambin-karama. Mitety lohasaha sy havoana ary ranobe mangeniheny anie izahay amin’ny fanaovana fanentanana e! Maimaimpoana avokoa ny hanaovanay izany asa izany ho fitsinjovana ny mpiara-monina. Misy ihany ny bisikileta nozaraina kanefa voafetra ihany koa ny toerana hahafahana mitondra izany. Misy fotoana, lanjaina miala any an-tanàna lavitra ny vehivavy bevohoka na marary, entina amin’ny lakana izay vao tonga eny amin’ny toeram-pitsaboana. Miantoka tanteraka ny fahatongavany eny ny tena ary manao izay vonjy aina azo atao rehetra. Amin’ny antsipiriany ny mombamomba ilay marary na ilay bevohoka entinay atolotra ny dokotera ary mamantam-bonona sisa ny mpitsabo. Izahay araka izany no tena manao ny asa fototra rehetra. Tokony ho mendrika ny hahazo tambin-karama ihany izahay amin’izany. Manantena ny fahendren’ny fanjakana izahay amin’io fitakiana io.
Miasa ao amin’ny tanànan’Ambohimahavelona, kaominina Marotandrano distrikan’i Mandritsara ny tenako. Efa karazam-piofanana maro no nataoko momba ny sehatry ny fahasalamana. Tsy mora ny fanentanana, samy manana ny toetrany ny olona resena lahatra. Tsy maintsy miampita rano vao tonga amina tanàna kely iray izay tena mbola mila fanentanana henjankenjana. Tavela roa andro any amin’izany toerana izany mihitsy indraindray. Izaho miakatra eto Antananarivo manatrika ny zaikabe izao, hatreny am-balahana ny rano niampitako ary dian-tongotra 50 km ny nandehanako izay vao tonga amin’ny fiara hitondra ahy aty. Tsy sanatria fitarainana be fahatany no ataonay mpanentana ara-pahasalamana fa efa nekenay io asa io ary hataonay. Miandry ny fahendren’ny fanjakana anefa izahay amin’ny fanomezana tambin-karama hanampy ny fahavitrihana amin’ny fanatanterahana ny asa. Fantaro fa mampiana-janaka, mila mampidi-bola ho an’ny ankohonana ary mila miasa tany hahafahana mivelona izahay. Tsy azo ampandeferina anefa ny asan’ny fahasalamana.